I Etazonia ny firenena lohalaharana, izay efa 4083 no maty, ary 759 786. Italie no faharoa, izay 24 114 no maty, ka 454 tao anatin’ny iray andro. Miisa 449 no namoy ny ainy tao anatin’ny 24 ora tany Royaume-Uni tao anatin’ny 24ora. Io no antontan’isa ambany indrindra hatramin’ny 6 aprily, araka ny fanambaran’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka omaly alatsinainy. Efa tafiakatra 16 509 ny isan’ny maty rehetra hatramin’izay. Mahatratra 124 743 ny olona rehetra voa, ka ny 4 676 amin’ireo dia tao anatin’ny iray andro avokoa. Any Frantsa, dia 547 no maty ka nampiakatra ny isa manontolo ho 20 265.
Tsy misy zavatra nafenina tamin’i etazonia izany
1400 be izao ny tranga vaovao
Mangata-panazavana amin’i Chine
Nitotongana 10,21 dolara ny barila